osXFCE lohahevitra mitaingina MacOS ho an'ny XFCE miorina amin'ny arc-flatabulous | Avy amin'ny Linux
osXFCE lohahevitra mitaingina MacOS ho an'ny XFCE miorina amin'ny arc-flatabulous
Luigys toro | | Fisehoana / personalization
Manandrana sy mankafy hatrany izahay Lohahevitra Linux, tamin'ity indray mitoraka ity dia faly izahay nanandrana ny iray tamin'ireo maro temotra nahazo aingam-panahy macOS Tena nahavita namboarina manokana. osXFCE izay ny lohahevitra voafidy, dia mahavita manamboatra ny Arc-flatabulous hahatratrarana ny famaranana madio kokoa ary hampitaovana azy miaraka amina fanahafana lehibe ho an'ny hazo fisaka azo antoka fa hanome endrika vaovao ho an'ny antsika izany Tontolon'ny birao XFCE.
1 Inona no atao hoe osXFCE?
2 Ahoana ny fametrahana osXFCE
Inona no atao hoe osXFCE?
osXFCE Is a lohahevitra ho an'ny XFCE aingam-panahy avy amin'i MacOS, noforonin'i Ian McCausland mifototra amin'ny lohahevitra arc flatabulous ary afangaro amin'ny famaranana anao manokana. Ny lohahevitra tany am-boalohany dia novaina be dia be mba hahafahana mifangaro miaraka aminy vala-panel-appmenu ary XFCE.
Ity lohahevitra ity koa dia tonga miaraka amina plank configur izay mifanentana tsara amin'ny style, izay hahatonga anao hanambatra singa sary roa amin'ny tontolon'ny birao amin'ny fomba mahafinaritra, hahatratrarana vokatra tena manaitra.
Na dia marina aza izany dia tsy lohahevitra manavao ny famaranana azy io raha toa ka taratry ny mahatoky ny zavatra atolotry ny MacOS antsika, izay tokony homen'ireo mpampiasa maniry ny hisitraka birao mitovy amin'ny an'ny fianakavian'i Manzanita ny tenany. ary andrana osXFCE.
Ho fanampin'izany, ity lohahevitra ity dia misy menio milatsaka mirindra tsara, fanaraha-maso ny varavarankely, vokany zorony boribory, vokany amin'ny fampiharana gtk sy fikirana fanampiny.
Ahoana ny fametrahana osXFCE
Azontsika atao ny mametraka ity lohahevitra ity amin'ny fomba mahazatra, raha ny momba ahy manjaro xfce dia ireto ny dingana fametrahana izay narahiko:
Clone ny tahiry repository
Adika amin'ny lahatahiry lohahevitra
Adikao ny fisie plank osXFCE amin'ny lahatahiry fampiharana
Safidio ny lohahevitra mifanentana amin'ny fisehoany, mampandeha plank ary manomboka mankafy.
Manantena aho fa ity lohahevitra ity dia manome safidy manokana ho anao ho an'ny tontolon'ny birao XFCE anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » osXFCE lohahevitra mitaingina MacOS ho an'ny XFCE miorina amin'ny arc-flatabulous
Mahomby kokoa ny fampiasana tontonana faharoa noho ny Plank ao amin'ny XFCE.
Federico Martin Lara dia hoy izy:
Ahoana no fomba hitondrako plank? Tsy voasoritra
Valiny tamin'i Federico Martín Lara
Voalohany dia tsy maintsy mametraka plank ianao, amin'ny linux andry sy ny derivative dia tsotra toy ny fanatanterahana ny baiko manaraka ioourt -S plank, amin'ny distros hafa dia ao amin'ny tahiry ofisialy, avy eo amin'ny menio (ao amin'ny hitsin-dàlan'ny fampiharana) dia manatanteraka plank ianao
Lahatsoratra tena tsara… ..
hoy namana nanandrana azy tamin'ny debian 9 ary mandeha daholo ny zava-drehetra, tsy misy na dia iray aza amin'ireo takelaka 2 ananako lasa fotsy, manana hevitra ve ianao ny amin'ny famahana izany?
Raha manao an'izany ianao dia tsy mandeha ho azy. Lara, azonao atao ny mihazakazaka azy ho azy raha toa ka amboarinao avy eo afovoany. Ao amin'ny fanombohana sy ny safidy amin'ny session ampio izany ho toy ny programa izay mandeha amin'ny startup
Manana olana amin'ity lohahevitra ity aho, efa nanandrana azy tamin'ny debian 9 xfce sy manjaro xfce ary tsy miova ho fotsy ny tontonana, mijanona mainty, miverina indray ary tsy misy, misy manana hevitra hanatsarana izany ve?
Inona ireo sary masina?
Ahoana no ahitanao ny menus Chromiun hiseho eo amin'ny tontonana ????
Misy olona manome antsipiriany momba ny fomba hanesorana ity. Tsy tiako na mijanona miloko tsy miova aho aorian'ny fanaovana ny zava-drehetra.
Miankina amin'ny fampirimana inona no nametrahanao azy, raha manaraka ny tutorial ianao (usr / mizara / lohahevitra), ampidiro ho adiresy ilay adiresy ary ampiasao ny baiko: rm -r "anarana fampirimana", (tsy misy teny nalaina)
PAM, NIS, LDAP, Kerberos, DS ary Samba 4 AD-DC - SMB Networks